Horumarinta Shiinaha ee Tattoo Cartridges Soo-saarista iyo Warshad | MOLONG
Soo saarida qalabka tattoo, laga bilaabo tattoo cirbadaha dhaqameed ilaa cirbadaha kaydadka, waxay ka dhigtay tatoosku mid sahlan, oo sahlan isticmaalka. Sannadihii ugu dambeeyay, irbadda garaashka ayaa ku adkaatay suuqa cirbadaha tattoo adduunka.
MOLONG TATTOO SUPPLY waxay leedahay waayo-aragnimo sannado badan soo saarista cirbadaha tattoo, oo leh warshad qiimo jaban iyo tayo wanaagsan. Sanadihii la soo dhaafay, iyada oo taageero ka heleysa macaamiisheenna badan ee adduunka oo idil, heerka wax soo saar ee cirbadaha kaydadka ayaa sidoo kale ka sii fiicnaaday oo ka sii fiicnaaday, asal ahaan heerka ugu sarreeya ee wax soo saar ee dhammaan warshadaha.
Weli waannu sii wadaynaa soo saarista irbado cusub oo kaydadka ah. Iyadoo la raacayo soo-jeedinta macaamiisha waaweyn oo aan wax ka baranno farshaxanno farshaxanno xirfadlayaal ah, waxaan sii wadi doonnaa inaan horumarinno farsamo ku sameyno si aan u hagaajino dhammaan cilladaha ay la soo gudboonaato irbadda kaydadka ee hannaanka taatikada. U oggolow macaamiisha inay si fudud noola shaqeeyaan, oo ay ka dhigaan farshaxanno farshaxanno ku faraxsan inay isticmaalaan. Dhanka kale, alaabada sii kordheysa ee alaabada keena ee loo yaqaan 'tattoo' iyo macaamiisha dalal kala duwan waxay rabaan inaan u qaabeyno cirbadaha ay ku calaamadeysan yihiin iyaga, waxayna sidoo kale ka heleen suuqyo aad u wanaagsan gobaladooda.
Cirbadahayaga loo yaqaan 'tattoo' cirbadaha, waxaan dhamaanteen u adeegsanaa cirbado tayo sare leh, waana diidanahay inaan isticmaalno cirbado jaban oo liita si aan u keydsano kharashka. Kuwa soo socdaa waa qaar ka mid ah cirbadaha kaydadka oo aan ku soo saarnay iib wanaagsan.